Weriye Maxamed Baaruud oo si mutadawacnimo ah wax uga beddelaya nolosha boqolaal qof oo ku jira xeryaha Dhadhaab. - BBC News Somali
Weriye Maxamed Baaruud oo si mutadawacnimo ah wax uga beddelaya nolosha boqolaal qof oo ku jira xeryaha Dhadhaab.
Bushra Nuur Maxamed Soo saare, BBC Somali
3 Oktoobar 2018
Lahaanshaha sawirka Weriye Maxamed Xussen Baruud.
Image caption Weriye Maxamed Xussen Baruud.
Shakhsiga Todobaadka ee BBC
BBC Soomaali ayaa bilaabaysa inay soo bandhigto todobaad walba shaqsi saamayn ku leh bulshada dhexdeeda. Barnaamijkan ayaa loogu magac daray Shaqsiga todobaadka ee BBC Soomaali.
Todobaadkanna waxaan idinla wadaageeynaa sheekada Maxamed Baaruud Xuseen oo ah weriye soo bandhiga muuqaallada dadka ku dhibaateeysan xerooyinka qaxootiga ee Dhadhaab Kenya.
Maxamed Baaruud waa weriye ka howlgala xeryaha qaxootiga, wuxuuna si mutadawacnimo ah u caawiyaa dadka saboolka ah, muqaallo ayuu ka soo duubaa, ka dibna wuxuu soo dhigaa baraha bulshada, gaar ahaan Facebook.
Muuqaallada ayuu ku soo bandhigaa nolosha dhabta ah ee ay ku nool yihiin qoyska uu doonayo in markaasi la caawiyo. Waxayna muqaalka uu ka dubaayo ku sheegaan dhibka haysta, taariikhdooda, iyo waxa ay doonayaan in loo qabto.
''Waxaan u adkeeysan waayay dhibaatada ka muuqata dadka aan codkooda la maqlin, ee waayeelada xanuunsan u badan''. ayuu yiri Maxamed Baaruud Xussen oo BBC-da la hadlay.
Kenya: 'Way naga go'an tahay inaan xirno Dhadhaab'
Lahaanshaha sawirka Maxamed Baruud Xussen
Image caption Wardo Saciid Axmed iyo saddexdeeda gabdhood.
Muuqaaladii u soo duubay ee saamaynta badan ka dhax dhaliyay baraha bulshada waxaa ka mid ahaa, mid uu ku soo bandhigay, Wardo Said Axmed oo ah hooyo soomaaliyeed oo saddex gabdhood oo ay dhashay ay dhimirka ka xanuunsanaayeen, cid caawisana aysan jirin. Balse markii uu muqaalka soo dhigay waxay soomaalida u uruuriyeen lacag gaareysan 30,000 oo Doolar.
Wardo Siciid Axmed oo la hadashay BBC ayaa sheegtay in nolosheeda isbeddel uu ku dhacay, gabdhaheedina ay sidii hore dhaamaan, maadaama ay heshay lacagtii ay ku dabiibi lahayd.
''Gabdhahaygii hadda sidii hore wey dhamaan, lacagta naloo keenay waxay ahayd 30,000 oo Doolar, qaar Quraan ayaan ku saaray, qaarna guryo ayaan ugu dhisay, markii hore waxaan ahayn dad dugaag u eg haddana dad ayaan nahay'' ayey tiri Wardo Saciid Axmed.
Lahaanshaha sawirka Maxamed Baaruud
Image caption Caddeey Kunle Colow waxay ka mid tahay dadka uu caawiyey Maxamed Baaruud
Xeryaha qaxootiga ee Dhadaab, waxaa ku nool dad tiro badan, in la ogaado dadka dhibaateysan halka ay ku nool yihiin aad ayey u adagtahay, balse Maxamed wuxuu sheegay in isaga uu raadiyo dadka caawimaadda u baahan.
''Aniga ayaa raadiyo dadka dhibaateysan, oo waxaan booqdaa xaafad kasto oo ku taal xereyaha, mar- marka qaarna dadka ayaa ila soo xiriiro oo ii sheega qofka caawimaadda u baahan, dhamaantood wey i yaqaanaan oo waxay hayaan telefoon lambarkeeyga oo waa ay i soo wacaan'' ayuu yiri Maxamed Baaruud.
Image caption Sacdiyo Yuusuf Cabdi oo gacanta ku haysata lacag uu u soo uruuriyey Maxamed Baaruud
In la aamino qof baraha bulshada ku soo bandhigaya muuqaallada dad doonaya in la caawiyo ma sahlana, dadka qaar ayaa aaminsan in dadka dhibaateysan lacagaha loo aruuriyo ay qaataan dadka loogu soo diro.
''Dad waxaa jiro u arka shaqada aan hayo inay tahay khayaali, oo aan waqtigeyga ku luminayo. Waxaana ay i yirahdaan muqaalladan aad soo duubayso dano gaar ah ayaad ku wadataa, balse aniga waxaan u sheegaa oo aan u soo bandhigaa qofkii oo faraxsan lacagtiina aan gudoonsiinayo, sidaasi ayaana keentay in dad badan ay i aaminaan'' sidaasi waxa yiri Maxamed Baaruud.
Qaar ka mid ah dhagaystayaasha BBC-da ayaan weydiinay waxa ay ka aaminsan yihiin dadka soo dhiga baraha bulshada muuqaallada dadka caawimaadda u baahan.
Aragtida qaar ka mid ah dadka nala soo xiriiray